Solony roa hafa amin'ny NERO handoro CD sy DVD ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Solony roa an'ny NERO amin'ny fandoroana CD sy DVD an'ny Linux
AnaGaby_Clau | | fampiharana, GNU / Linux
Mampihena ny isan'ny mpamily CD sy DVD izahay, satria nifindra monina tany amin'ny Blu-Ray sy USB izahay, saingy manohy manodidina anay izy ireo. Azo inoana fa maro amintsika no manana asa, lalao, mozika ary sarimihetsika efa an-taonany maro ao amin'ireo kapila ireo, ary olona maro no mbola mampiasa azy ireo isan'andro.
Ohatra, fony aho niasa tamin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro dia tena nilaina izy ireo tamin'ny fampitana vaovao tamin'ny mpanao gazety sy tamin'ny fomba ekonomika. Mbola safidy tsara ho an'ireo tranga ireo izy io. Ilaina ihany koa ny manafangaro mozika ho an'ny mpianakavy na namana iray, satria ny fiara sasany mbola manana mpilalao CD. Ary ho an'ireo mpahay siansa amin'ny solosaina dia afaka mahasoa izy ireo rehefa mila manolo rafitra miasa amin'ny solosaina taloha, izay tsy mandeha ny USB.
Na inona na inona antony, mety hisy izany Aleo manohy mampiasa kapila CD / DVD mandritra ny taona maro; ary ho an'ireo izay nifindra monina hanokatra lozisialy loharano loharano dia mora ny mahazo fitaovana handoroana kapila mora foana. Izany no antony anoloranay programa roa ho anao, tsy mitovy amin'ny Néron, izay afaka manampy anao izao fa manana rafitra miasa GNU / Linux ianao.
1.1 Ahoana ny fametrahana Brasero
2.1 Ahoana ny fametrahana K3b
Nataon'i Gnome ary nozaraina ho an'ny GNU / Linux, Brasero manasongadina interface tsara GUI madio izy io hamoronana kapila maro karazana. Rehefa manokatra azy voalohany ianao dia manome anao andiana safidy hamoronana rakipeo feo, horonantsary na data; ary koa azonao atao 1: 1 kopy misy kapila efa misy. Izy io dia misy editor editor, izay tsy mandroso toy ny programa amin'ny famoronana fonosana, tsara fa manana izany izy. Ary farany, zavatra tsara momba an'i Brasero no ifandraisany amina fanitarana, izay mamela ireo fitaovana samihafa azo ampiana misaraka.
Ahoana ny fametrahana Brasero
Azontsika atao ny misintona an'i Brasero avy amin'ny:
Brasero Repository (FTP): ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/source/brasero/3.12/brasero-3.12.1.tar.xz
Ireo fiankinan-doha takian'i Brasero
avy eo mametraka izahay Brasero mihazakazaka ireto baiko manaraka ireto:
./configure --prefix = / usr \_ --enable-compile-fampitandremana = tsia \_ --endeb-cxx-fampitandremana = tsia && manaova
Manaraka amin'ny maha mpampiasa azy root
Ho an'ireo izay mifanaraka kokoa amin'ny tontolo KDE, K3b (famintinana ny KDE Burn Baby Burn) dia safidy tsara hafa. Toa an'i Brasero, ny K3b dia mifanaraka amin'ny karazany sy ny endrika kapila, ary koa ny andiana fitaovana sy baiko hampiasaina mandritra ny programa. Io dia ahafahanao mifehy bebe kokoa amin'ny fizotran'ny famoronana kapila. Raha zohina, K3b dia interface tsara be.
Ity rindrambaiko ity dia tsy nanana fanavaozana vao tsy ela akory izay, fa ilay efa misy kosa dia milamina ary manana fitaovana maro. Ka tsy tokony hanahirana ny ankamaroan'ny mpampiasa izany.
Ahoana ny fametrahana K3b
ny fepetra takiana amin'ny fametrahana K3b Azo alaina ao amin'ny tranokala ofisialiny, rehefa avy nametraka ireo fiankinan-doha ilaina izahay
Misintona ny kaody loharano avy aminay izahay Pejy fampidinana K3b
Izahay dia maka ny kaody loharano ao amin'ny lahatahiry tianay:
Miova amin'ny lahatahiry noforoninay izahay:
Manamboatra ny kaody izahay:
Miaraka amin'ny kinana K3b teo aloha dia nilaina ny manome unfiks, fa ny rafitra fanangonana KDE vaovao dia afaka maminavina tsara azy
Atombohy ny fanangonana:
Raha tsy manipy lesoka io baiko etsy ambony io dia manohy mametraka K3b izahay, amin'ny maha root mpampiasa anay
# su -c "manaova fametrahana"
Afaka manomboka mampiasa k3b ianao izao, izay hita ao amin'ny fizarana multimedia ao amin'ny menio fampiharana anao
Eny, misy safidy maro hafa ho an'i Nero, heveriko fa tena tsara ity mpivady ity, fa raha manana sosokevitra hafa ianao dia tianay ho fantatra izany. Zarao aminay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Solony roa an'ny NERO amin'ny fandoroana CD sy DVD an'ny Linux
Anonymous dia hoy izy:
mbola mampiasa nero ve ny olona?
Hatramin'ny nandaozako an'i XP dia natolotro ho faty izy
Eny, ampiasain'izy ireo, ampiasainy, na dia mino aza aho fa efa misy ny vahaolana arahin'antoka noho ny Nero, na dia io aza no malaza indrindra .. Ankehitriny ho an'ny rindrambaiko maimaim-poana, tsara be ny brasero
Raha ny marina eny hahaha, natolotro ho faty koa izy, fa izy no mbola malaza indrindra, tsoriko izao fa misalasala aho.
Etsy ankilany, ny haino aman-jery optika dia efa eo ivohony, eny fa na eo amin'ny bluray aza dia efa afaka mijery sarimihetsika amin'ny alàlan'ny streaming ianao. Izaho manokana dia efa misafidy USB, SD ary zavatra hafa hanaovana format ary zavatra maro.
Lahatsoratra tsara, azo antoka fa k3b feno kokoa 🙂
Modem dia hoy izy:
Tamin'ny taonako izay nandoroako DVD be dia be ho takalon'ny xD, nampiasa k3b be dia be aho, tena tsara izany, satria mampiasa Gnome foana aho, tsy mampaninona ahy ny mametraka tranomboky Kde roa mihitsy, nisy zavatra tsy nety tamin'ny brazier, matetika aho tsy nahomby tamin'ny DVD9, noho izany Namboarina nampiasa K3b aho, amin'izao fotoana izao dia tsy mampiasa DVD intsony aho ary raha ilaina ny firaketana zavatra dia ampiasaiko tsotra izao ilay baiko.
Mamaly an'i MoDeM
Hermen dia hoy izy:
Toa ahy, dia aleoko foana ny K3b noho i Brasero na dia miasa amin'ny tontolo GTK aza… Toy izany koa, samy tsara avokoa…
Valiny tamin'i Hermen
fprietog dia hoy izy:
Zava-poana ny fandoroana CD na DVD ambanin'ny Linux (azo atao avy amin'ny akorandriaka aza). Fa ny fandraketana Bluray mampiasa programa Linux tera-tany dia sarotra lazaina.
Mampiasa imgburn aho, izay ho an'ny Windows nefa miasa 100% miaraka amin'ny divay amin'ny Linux.
Mamaly an'i fprietog
Brasero dia tonga amin'ny toerana misy anao amin'ny distro tsotra maro, miasa tsy misy fahatapahana bebe kokoa izy io, azonao atao ny mandoro ny iso amin'ny kapilao ary manao kopia kapila CD na DVD 300, K3b dia tena feno fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mampiasa ny fahafahany feno. ny brasero sy K3b izay efa fantatra ankehitriny, ny fandraisam-peo ao anaty fitadidiana dia haingana sy mora kokoa. mahafaly
Aurelio janeiro dia hoy izy:
Te-hametraka fanontaniana aho. Rehefa manao kopia aho (fifangaroan'ny mozika amin'ny endrika mp3) dia matetika no ataoko (rehefa mampiasa Windows) avy amin'ny Realplayer. Tombony ho azy ny nampita ny fampahalalana momba ny rakitra manontolo tao amin'ny CD. Izany hoe, rehefa notendrena tao amin'ny CD fiara ny mozika, ohatra, dia hiseho ny fampahalalana lohatenin'ny hira. Ireto fandaharana roa ireto (Brasero sy K3b), manao izany ve izy ireo?
Valiny tamin'i Aurelio Janeiro
Mahatsiaro ho toy ny nitety ny lasa aho rehefa namaky ity lahatsoratra ity, nataon'i Brasero sy ireo pikantsary miaraka amin'ny lokon'ny volan'ny Ubuntu taloha.
Valiny tamin'i Kannon
Noheveriko fa ho an'i Nero no nilazanao azy
Mampiasa Brasero aho, efa ao amin'ny kinova 3 ao amin'ny Ubuntu izy ary mamela ny fanaovana fanangonana am-peo roa (tsy voafehy ho an'ny cd radio taloha) izay hira vitsivitsy ihany no mifanaraka mandra-pahatongan'ny fanangonana data (miaraka amin'ireo rakitra mp3). Amin'ireo tranga roa ireo miaraka amin'ny anaran'ny fisie feno, na dia miankina amin'ny fahaizan'ny radio mamaky ny anaran'ireo fisie na ireo Tags tafiditra ao anaty mp3 aza izany.
Eny, nampiasa programa roa aho ary niaraka tamin'i Brasero, izay tena mora ampiasaina, nanana olana vitsivitsy toy ny rakipeo izay tsy novokarina taty aoriana aho ary ireo zavatra toa izany dia tsy nijaly tamin'ny k3b aho raha toa toa tsy dia nisy dikany firy noho i Brasero. Hijanona ao amin'ny duel hipotetika amin'ny masoandro amin'ny K3b aho. Miarahaba antsika rehetra,
Marty mcfly dia hoy izy:
Te hahafantatra izay eritreretinao momba ny Xfburn aho; tsy voalaza tao amin'ny lahatsoratra izany ary ny toerana misy anao ao Xfce… Ratsy ve raha tsy lazaina izany? Sa tsy misy mahalala azy?
Valiny tamin'i Marty Mcfly
Tsy ratsy mihintsy izany, mamela ny fiasa fototra (sy ny fotoana vitsy nampiasako azy, niasa ho ahy izy io).
Miasa amin'ny Xfce ve i Brasero? Moa ve Xfburn mandefa ny fampahalalana ireo tag mifangaro ao amin'ilay mp3?
MorbiDeath dia hoy izy:
Tsy manana traikefa tsara afa-tsy amin'ny k3b aho. Brazier tsy tiako, fa tsy ny ratsy indrindra.
Mamaly an'i MorbiDeath
Jorge Rafael Almeida Orellana dia hoy izy:
k3b dia manana olana amin'ny hafainganan'ny fandraketana ny taratra blu, ka 100 heny haingana kokoa ny Xfburn (atoro anao)
Valiny tamin'i Jorge Rafael Almeida Orellana
Xochitl dia hoy izy:
Salama, nametraka an'i Brasero tamin'ny #yum aho ary nihazakazaka azy saingy tsy afaka mandoro na mitahiry rakitra amin'ny CD aho.
Misy aminareo ve afaka manampy ahy amin'izany?
Valiny tamin'i Xochitl
Araho maso ny fahombiazan'ny GNU / Linux-nao miaraka amin'ity script PHP ity
MATE 1.16 misy amin'ny fanatsarana ny fifanarahana GTK3 +